Lighting AN'NY TAOZAVA-BAVENTY
LED Tri-porofo Light
Fahazavana LED Linear High Bay
LED OVNI High Bay Light
LED Linear fahazavana
LED Panel fahazavana
2.4G Wireless dimming sy fotsy tunable Light
Jiro fitahirizana mangatsiaka
Offices & Hopitaly
trano fanatobiana entana Lighting
BIRAO & FITSABOANA
Izahay fanavaozana hatrany mifototra amin'ny fitakiana ny mpanjifa, nametraka ny nitarika toerana amin'ny fikarohana, fampandrosoana, injeniera, sy ny varotra ny jiro LED ara vahaolana. Miantehitra amin'ny feno Lighting nitondra tombony ny fikarohana, fampandrosoana, injeniera, sy ny varotra, Abestis lasa manan-tsaina nitondra Lighting mpisava lalana. Amin'izao fotoana izao, ny vokatra sy ny vahaolana efa ampiharina any am-polony ny firenena sy ny servemillions mponina manerana izao tontolo izao .:
Ny toko voalohany: An Agent de ny Product
Izahay fanavaozana hatrany mifototra amin'ny fitakiana ny mpanjifa, nanorina ny orinasa mitondra toerana ao amin'ny saha lehibe efatra: fiarovana filàna fototra, faritra sy ireo rafitra, asa fanompoana sy ny terminal./span>
Ny toko faharoa: ODM Service
Indraindray tsy maintsy hieritreritra ivelan'ny boaty, araka ny hita ny fangatahana maro no efa tanteraka ho an'ny tsy manan-tsahala jiro vaovao vahaolana. LED onja dia Original Equipment Manufacturer, mihoatra ny folo taona ny traikefa manome LED sy ny zana-kazo ho an'ny tsy miankina e mpanjifa ao amin'ny isan-karazany ny orinasa.
Nanapaka Edge LED Teknolojia
Ny œ / OES mpanjifa afaka mampiasa ny ekipa manan-talenta ny injeniera. On-toerana ny R & D departemanta mavitrika mitady ka Dinihiny ny farany fivoarana ara-teknolojia LED ho an'ny tetikasa.
Ny toko faharoa: OEM Service
Tsy misy-size-mahafehy-LED vahaolana rehetra. Manana ny fahaiza-manao mba mampifanaraka ny dingana sy ampanjifaina na ny vokatra - na hanao ianao iray vaovao - ny marina fepetra arahana.
Mahery Supply Chain
Ny famatsiana no fototra iorenan'ny OEM ny raharaham-barotra. By manamafy asa ambany tafo iray, LED Onja tolotra manam-paharoa ny mangarahara, tsara, ary ny zava-dehibe ho an'ny œ sy OES mpanjifa.
Lighting Abest Fanahy dia "foana fampanantenana sy hamantatra ny tsara indrindra"! Abest kolontsaina miorim-paka ao am-po Abest mpiasa, ary manome ho an'ny Abest mavitrika fampandrosoana maharitra.
5 rihana, Building 8, Hua Feng ny Siansa sy ny Teknolojia Park, Tangwei, FuYong Town, Bao'an District, Shenzhen, PR Shina
Tunable White Hitany Panel , Smart Hitany Panel Light , Tunable White Lighting , Smart Lamp , Hitany Tunable , Smart Hitany Track Lighting , rehetra Products